Khuraafaadka jacaylka jacaylka | Bezzia
Khuraafaadka jacaylka jacaylka
Maria Jose Roldan | 20/06/2022 22:44 | Xiriirka
Jaceylka jaceylku waa mid ka mid ah been abuurka weyn ee ka dhaca dunida dhabta ah ama mala-awaalka ah ee filimada ama buugaagta. Jaceylka noocaan ah wuxuu keenaa fikrado aad u weyn oo ka dhexeeya xubnaha lammaanaha iyo in la buunbuuniyo oo aan la mid ahayn waxa ka dhaca dunida dhabta ah. Waxaa muhiim ah in laga fogaado khuraafaadkaas oo aad jacayl dhab ah kula noolaato qofka aad jeceshahay.
Maqaalka soo socda Waxaan ka hadlaynaa taxane khuraafaad ah oo jacayl jacayl ah iyo sida khuraafaadkani ay dhaawac weyn ugu geysan karaan lammaanaha.
1 Raadinta badhkii ka wanaagsanaa
2 jacaylku wax walba wuu awoodaa
3 Dadka ka soo horjeedaa way jecel yihiin oo is jiidanayaan
Raadinta badhkii ka wanaagsanaa
Fikradda nuska wanaagsan waa mid ka mid ah khuraafaadka la xidhiidha jacaylka jacaylka. Waxaa loo malaynayaa in jacaylku yahay mid gaar ah oo uu jiro qof adduunka ku nool oo nagu farxi doona nolosha. Dad badan ayaa qaladka weyn ku gala inay noloshooda oo dhan sugaan kala badhkaas ka wanaagsan oo aan weligood iman. Waxaas oo dhami waa shay been abuur ah oo iska leh xaqiiqada dhabta ah ee jacaylka jacaylku ku dhaqaaqo. Ujeedadu waa in la noolaado xiriiro kala duwan oo qofka ka caawiya in uu si cad u sheego waxa uu rabo ee ku saabsan mawduuca jacaylka.
jacaylku wax walba wuu awoodaa
Jaceylka ka muuqda mala-awaalka waa mid cajiib ah oo ka gudbi kara caqabad kasta oo la horgeeyo. Nolosha dhabta ah, Taas lidkeeda ayaa dhacda oo ah in jacaylku aanu wax walba samayn karin. Jacayl aan la ixtiraamin qiyamka kala duwan lama ogolaan karo. Ma jiraan wax dhacaya haddii aad tiraahdo maya jacaylka iyo xiriirka. Runtii waxa ugu muhiimsan waa farxadda nafteeda, iyada oo aan loo eegin in qofku keligii nool yahay ama uu qof kale la nool yahay.
Dadka ka soo horjeedaa way jecel yihiin oo is jiidanayaan
Arinta caadiga ah ayaa ah in labada qof ee kala fikir iyo fikrado kala duwan oo xiriirkooda ilaashanaya ay si joogta ah isaga hor yimaadaan. Muranka iyo iska hor imaadyada joogtada ah waxay inta badan si xun u dhaawacaan nooc kasta oo xiriir ah.. Inta badan kiisaska, kala duwanaanshaha noocan oo kale ah ee ku saabsan fikradaha ayaa badanaa keena dhibaato weyn marka ay timaado ilaalinta xiriirka loo arko mid caafimaad qaba. Xaalado badan runtii way adagtahay in la sii wado xidhiidhka qof aad ka duwan oo ka soo horjeeda.
Marka la soo koobo, jacaylka jacaylka ah sida aynu u fahannay waxa uu ku dhacaa uun khayaali. Waxaa cad in nolosha dhabta ah, jacaylku aad buu u dhib badan yahay oo dhib badan. Muhiimadu waa in aad ku raaxaysato jacayl caafimaad qaba sidoo kale xoog leh oo waara. Waxaa jira qiyam taxane ah oo ay tahay inay joogaan mar walba xiriirka, ha ahaato kalsooni, ixtiraam ama dulqaad. Isku darka waxaas oo dhan waxay dhalinaysaa jacayl caafimaad qaba iyo wanaag gaar ah oo ku dhex jira xidhiidhka. Xusuusnow in aad sida ugu macquulsan uga cararto jacaylka ku dhaca khayaaliga oo ku raaxayso jacayl dhab ah, qaan-gaar ah oo caafimaad qaba.
Wadada buuxda ee maqaalka: Bezzia » Cilmu-nafsiga iyo lamaanaha » Xiriirka » Khuraafaadka jacaylka jacaylka
Zucchini iyo mozzarella gratin
Jikada leh bandhigyo: macuuntaada oo la arko